Ihe omumu omumu: uru di iche iche ndi okachamara ahia di iche iche nyere gi ahia ahia ahia
Ọ bụla ezigbo ụlọ ọrụ ịzụ ahịa ga - enwe ike inyere azụmahịa gị eCommerce akangwa ngwa mgbe ị na-ebelata nchegbu ọ bụla i nwere. Ọ bụ ihe okike na ndị nwe ụlọ ahịa niile chọrọ ịmalite ụlọ ọrụ ha, na-emepụtawanye iheahia na iru ndi isi na otu niche ahia.
Dịka o doro anya, enyemaka dị gị mkpa n'oge ụfọdụ. Ịhọrọ ahịa ahịa dijitalụụlọ ọrụ kwesịrị ịbụ ezigbo ebe ịmalite - domain kime ait. Jason Adler, onye njikwa ndị ahịa nke Ọkachamara akọwa ihe 8 uru ị ga-enweta ma ọ bụrụ na ị goro ndị ọkachamara dijitalụ.
Ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-ahụkarị dị mma n'ịmepụta, ịzụta na ịnyefeokporo ụzọ gaa ebe ọ dị mkpa. Gịnị mere ha ji dị mma? Ọfọn, ọ bụ n'ihi ihe anọ a:
Ahụmahụ. N'inwe ahụmịhe zuru oke nke ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche,ụlọ ọrụ gị na-ere ahịa ga-ahụ ọtụtụ mkpọsa nke ọma.
Òtù. Ị ga-enwetakwa nkọwa zuru ezu banyere ego ole ejiji n'ọrụ ahụ
Oge arụmọrụ. Zọpụta onwe gị oge bara uru site n'ikwe ka ha jideụdị ahịa azụmahịa mgbe ị na-emepụta ihe ọ bụla ọzọ.
Economical. Ebe ọ bụ na ha gaara azụrụ ọtụtụ mgbasa ozi n'ihuaka gị, ha (ụlọ ọrụ) nwere ike ịnweta ọnụ ọgụgụ ka mma.
Dịka aha ahụ na-atụ aro, ahịa ahịa na-agagharị na -emepụta eserese, vidiyona isiokwu wee kesaa ha na ihe mgbaru ọsọ nke ịdọta, na-ekere òkè ma na-agbanwe ndị surfers n'ime ndị ahịa. N'ụwa taa ebea na-eji ọdịnaya nkwado maka nzube ndị ahịa na-agba agba, ahịa ahịa na-emepụta uru. Ọ bụ ọrụ ahịaụlọ ọrụ iji mepụta ọdịnaya ọhụrụ, nke na-akpali akpali ma dị mma maka gị.
Usoro ahia a ejighi eji ego eme ihe n'ụzọ zuru ezuọrụ nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa na ị nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta ezigbo utịp. Naanị mepụta ndepụta nke ihe a ga-eme na gịụlọ ọrụ ga-elekọta gị maka gị.
Nlekọta mgbasa ozi mgbasa ozi
Ọ bụ ihe na-emekarị maka ụlọ ọrụ na-agba ọsọ ibe weebụ mgbasa ozi - peeji Facebook, aOzi YouTube, Google ma ọ bụ Twitter akaụntụ. Imelite akwukwo ndi a mgbe nile bu isi ogwu, nke o kwere omume imeri yaenyemaka nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa.
Weebụ weebụsaịtị & mmepe
Ndị ahịa na-azụ ahịa maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Ụfọdụ na-eme nke ahụ nanị n'ihi naha nwere ike, na ndị ọzọ na-eme ya maka ihe ọ bụla ọzọ dị mma mere. O bu ihe nwute, obughi mmadu nile nwere ike iji aka ya weputa yaihe dị mma maka ọnụnọ n'ịntanetị (imewe weebụ). Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ, mgbe ahụ gị n'ụlọnga ga-enyere gị aka.
Ihe nkiri na foto dị oké mkpa ma a bịa n'inweta ihe na ntanetị.Chee echiche banyere ọnọdụ nke onye ọrụ na-enweghị ntụle banyere otu ngwaahịa si dị - onyinyo ma ọ bụ vidiyo mgbe ahụ kwesịrị ịbịaru aka.Nke a ga-emezu nke a site na ezigbo ụlọ ọrụ azụmahịa.
njikarịcha ọnụ ọgụgụ ntụgharị (CRO)
E nwere ọtụtụ narị ụlọ ọrụ ahịa na-enye CRO. Nke a (CRO)na-adabere na nyocha na nchịkọta data iji megharịa ọdịnaya weebụ nke a gbanwere n'ime ndu. CRO bụ nkà na ụzụ, ya mereachọrọ ọrụ ọkachamara ka eme.
Ka azụmahịa ahụ na-etolite, ị ghaghị inweta ihe ịma aka ndị ọzọ. Makadịka, ka ị na-emepụta ahịa ndị ọzọ, ị ga-enweta ọrụ ndị ọzọ na-edozi. Site n'inweta ngwaahịa, ị ga-enweta ihe ndị ọzọsoro. Tụba ọtụtụ nhọrọ mgbasa ozi ,SEO mmelite, ngwá ọrụ mgbasaozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ma ị ga-enweta ihe osise sara mbara karị.